littlebrook: သမီးနဲ့ စကားစမြည်
Posted by little brook at 12:50 AM
ဖေဖေကြီး ဖေဖေကြီး... ဟီးဟီး :P
စိတ်ကူးတွေ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ပေါ်ပါစေဗျ.. ဆုတောင်းသွားပါတယ် ဟိဟိ :)
ဟားဟားဟား .. ဟားဟား
ငါ့ညီမနှယ် အော် ဟားဟား
ရီပဲရီချင်တော့တယ် .. စိတ်ကူးကြည့်တာပါကွ :P
စိတ်ကူးကြည့်တာ တကယ်လိုပဲ .. :D
သမီးဖို့ ခွေးလေးတစ်ကောင်မွေးပေးမယ့် ဖေဖေရေ...ဖေဖေ့ ရင်ဘတ်ထဲက သမီးလေးကို မြင်မိအောင်မြင်သွားပါတယ်....:)
ဒီစာဖတ်ပီး အိမ်ထောင်ပြု သမီးမွေးချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ဗျာ ..ကျနော်လဲ သမီးချစ်တတ်တယ်... သမီးလေးက ကြီးလာရင် တော့ ယောင်္ကျားလေးဖြစ်သွားရင်ကောင်းမှာ .ဟီးဟီး သူများပိုးသွားတာ ခံနိုင်မှာဟုတ်ဘူး ...ကိုယ်ကသာ သူများကို ပိုးတာ ... ကိုယ့်သမီးတော့ မပေးချင်ဘူး ။း)
ကြိုတင်စိတ်ကူးတာတောင် ဒီလောက်ကြည်မွေ့ နေရင် တကယ်သာဆို...။
ကျွန်တော် လစ်တဲဘရွတ်ခ်သည် ရည်းစားတစ်ယောက်ပီးတစ်ယောက် စွန့်ပစ်သွားခြင်းကို ခံရသည့် အသုံးမကျသော လူပျိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ပါက ဤတသက် မိန်းမရပြီးမှ သေပါရစေဗျား :P
လူတိုင်းက ရူးကြတာပါပဲ။ ရူးတာတောင် ဒီလောက်စိတ်ကူးပုံဖော် အနုစိပ်ရင် ...
အော် ဂယ်ကြီးအောက်မေ့ပါတယ် စိတ်ကူးယဉ်ဖေဖေကြီးကို
ဟ ! ဟ !
်မနက်ဖြန် အကြောင်းကို ကျနော်တို့ တစ်ထစ်ချ မပြောနိုင်ဘူးလေ ကိုစမ်းချောင်းငယ်
တနေ့ ဒီလိုသမီးလေး မရှိလာဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ
ကျနော်တို့ အိပ်မက် မက်ခွင့်တော့ ရှိပါတယ်ဗျ
စရိတ်တွေ တာဝန်ယူ ဒါပဲ။
ရိုးရိုး လေးပေမဲ့ ထိထိမိမိနဲ့ ရသမြောက်အောက်ရေးတတ်တယ်... ကောင်းတယ်...
ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားလေးတွေက များသောအားဖြင့် အိမ်ထောင်သည်ဘဝကို ကြိုစိတ်ကူးမိတဲ့အခါ သမီးကလေးတွေ လိုချင်တတ်ကြတယ် ။
ကျွန်တော်လည်း သမီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းကလေးတွေ ဥပမာ သံသရာစမ်းရေ ၊ အရူးအမူးသမီးလေး လို သီချင်းမျိုးတွေကို ခုံခုံမင်မင် နားထောင်ဖြစ်တယ် ။
မြင့်မိုးအောင် ရဲ့ တုနှိုင်းမဲ့ရတနာပြီး ရင်
ကိုစိုင်း ရဲ့ သမီးနဲ့ စကားစမြည်
အရင်ဆုံး ချစ်သူတယောက်လောက် ဖြစ်ဖြစ်ပါ့း)
အမောင်ဂျဲဂျယ် သင်သည် ငါ့အား လာ၍ လှောင်ပြောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်တော့ သကိုး
မီးလေးက ဖေဖေဂျီး ဖေဖေဂျီး ဖေဖေဂျီးကို ချစ်တယ် တဲ့
ဟဟ ကိုဘရွခ်တုိ့ သမီးလေးမွေးလာရင်တော့